PC Knowledge Episode 5: Computer Motherboard တွေ အကြောင်း Part2• TECH CORNER
တစ်နေ့က Motherboard တွေ အကြောင်း Ep5Part 1 အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့မှာတော့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ Motherboard components တွေ အကြောင်းကို Part2အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Components တွေကို ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာ အရမ်းရှည်မှာစိုးတာကြောင့် တိုတိုနဲ့ လိုရင်းကိုပဲ ဖော်ပြပါမယ်။
(1) CPU Socket, (2) Chipset, (3) DIMM Slots တွေ အကြောင်းကို Part (1) မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
အခုပုံထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Components တွေရဲ့ နေရာဟာ Motherboard တော်တော်များများမှာ ရှိတဲ့နေရာတွေ ဆင်တူကြပါတယ်။ တချို့သော Motherboard အနည်းငယ်ကတော့ ဒီဇိုင်းအရ နေရာ အနည်းအပါး ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Components တွေရဲ့ ပုံစံသွင်ပြင်ကတော့ ပုံထဲက အတိုင်းပါပဲ။
Modern Motherboard (image via Quora)
4. M.2 Socket
Image credit ByteByteBit
M.2 Form Factor နဲ့ SSD တပ်ဆင်ရမဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် M.2 Form Factor တွေက ပုံထဲက အတိုင်း3မျိုးရှိပါတယ်။
Form Factor အလိုက် M.2 SSD တပ်မဲ့နေရာမှာ Screw လေး Motherboard မှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Screw လေးနဲ့ M.2 SSD ကို တပ်ဆင်ရတာပါ။ SATA တွေလို Cable မလိုပါဘူး။
Image credit aptnc.com
(အသေးစိတ်ကို SSD တွေ အကြောင်းရေးသားတဲ့အခါ ထပ်မံ ဖော်ပြပေးပါမယ်။)
SATA Cabel အသုံးပြုပြီး Storage Devices တွေဖြစ်တဲ့ Hard Drives (HDD), Solid State Drives (SSD) တွေကို ချိတ်ဆက်ရမဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။
6, 7. Front Panel Connectors, USB 2.0 Headers
Computer Casing မှာပါတဲ့ ရှေ့ဘက်ခြမ်းက Power Button, USB 2.0 အပေါက်၊ Reset Switch စတဲ့ နေရာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ရမဲ့ connectors တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ (Computer Casing တွေမှာ ဒီလို ရှေ့ဘက်ခြမ်းက ခလုတ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက် ကြိုးတွေ ပါပြီးသားပါ၊ ဒီကြိုးတွေနဲ့ အခု ဖော်ပြထားတဲ့ နေရာကို လာပြီး connect လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
8. CPU Fan Connector
ဒီကောင်ကတော့ ရှင်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့ CPU ကို Socket မှာ တပ်ဆင်ပြီးရင် CPU ကို အအေးပေးဖို့ Air Cooler or AIO Cooler တပ်ဆင်တဲ့အခါ Cooler မှာ တစ်ခါတည်းပါလာတဲ့ ကြိုးနဲ့ connect လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
9. 8 Pin 12V EATX Power Connector
ဒီကောင်က Power Supply ကနေ ထွက်လာတဲ့ ကြိုးနဲ့ connect လုပ်ရမဲ့နေရာပါ။ သူ့တာဝန်က CPU ကို ပါဝါကျွေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
8+4 Pin (Image credit Level1Tech)
တချို့ Motherboard တွေမှာ 8 Pin နှစ်ခု 16 Pin အဖြစ်နဲ့လဲ ရှိပါတယ်။ TDP များတဲ့ Powerful CPU တွေအတွက် or တချို့ CPU တွေက Overclock လုပ်နိုင်တာကြောင့် (Overclock လုပ်ရင် Power Consumption များ) ရယ် 8 Pin နှစ်ခု ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
10. CPU Voltage Regulator (VRM)
ကျွန်တော်တို့ မီးအားမငြိမ်တဲ့ ဒေသတွေမှာ Aircon တို့ ရေခဲသေတ္တာတို့ သုံးတဲ့အခါ မီးအားအတက်အကျ ရှိလို့ ကိုယ့် Aircon, Refrigerator ကို ပျက်မှာစိုးတဲ့အတွက် ကြားထဲကနေ Regulator တွေ ခံသုံးကြပါတယ်။ ဒီကောင်ကလဲ ဒီလိုပါပဲ PSU က ထွက်လာတဲ့ Power ကို CPU ကို ကောင်းကောင်းနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ Power (Volt) ကစားပြီး Overclock လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ ဒီ VRM က အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
VRM နဲ့ နောက်အလုပ်တစ်ခုက PSU ကနေ CPU ကို 8 Pin or 16 Pin နဲ့ Power ပေးတဲ့အခါ 12V နဲ့ လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် CPU တွေက 1.5 V ဝန်းကျင်ပဲ လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် DC 12V to DC 1.5V (ဝန်းကျင်) ကို ပြောင်းလဲ ပေးတဲ့ အလုပ်လဲ လုပ်ပါတယ်။
11. Memory VRM
ဒီကောင်ကလဲ CPU ရဲ့ VRM နဲ့ သဘောတရားအတူတူပါပဲ။ တချို့ RAM ကိုပါ Overclock လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် Memory (RAM) အတွက် VRM ပါတာက ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
12. 24Pin 12V Power Connector
24 Pin Power Connector (Image credit: MNPCTECH.COM)
Motherboard တစ်ခုလုံး လိုအပ်တဲ့ Power (12V) ကို PSU ဆီကနေ 24 Pin ကြိုးနဲ့ လာဆက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
13. အပြာရောင် လေးထောင့်ကွင်းလေးနဲ့ မြားထိုးပြတဲ့နေရာက အပေါက်တွေဟာ PC ရဲ့ နောက်ကနေ IO Shield က တဆင့် ထွက်လာမဲ့ အပေါက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ USB, Ethernet, Display Port, HDMI, DVI, Audio စတဲ့ အပေါက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(IO Shiled ဆိုတာ ဒီကောင်တွေ Casing ကနေတဆင့် အပြင်ကို ထုတ်တဲ့အခါ အံဝင်ခွင်ကျအောင် ခံတဲ့ Metal အပြားလေး ဖြစ်ပါတယ်။ IO Shield က Motherboard ဝယ်ရင် တစ်ပါတည်း ပါလာလေ့ရှိပါတယ်။ ပုံထဲမှာ ကြည့်ပါ။)
14. USB 3.1 Gen 1 Header
ဒီကောင်ကလဲ နံပါတ် 6,7တို့ကလိုမျိုး Casing က USB 3.1 Gen 1 အပေါက်ကို ကြိုးနဲ့ ဆက်ရမဲ့ နေရာပါ။ တချို့ Motherboard တွေမှာ အခုလို 24 Pin Connector အနားမှာ ပါတတ်ပြီး တချို့ကတော့ အောက်ဘက်က Front Panel Connectors တွေ အနားမှာပဲ ပါလေ့ရှိပါတယ်။
15, 16. PCI Expres x16 Slot, PCIe x1 Slot
PCI Express Generations တွေ၊ Speed တွေ နဲ့ x16, x1 တို့ စတဲ့ အကြောင်းတွေကို ခေါင်းစဉ်သပ်သပ်တစ်ခုနဲ့ ရေးမှ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ x16 က GPU ဆက်တဲ့နေရာလို့ပဲ မှတ်ထားပေးပါ။
PCIe Connectors (image credit: Server Fault)
အခြား x8, x4 နေရာတွေမှာကျတော့ PCIe Interface နဲ့ Sound Cards, Stoage စတာတွေကို ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။
17. CR2032 Lithium Battery
ဒီကောင်က Motherboard ပေါ်က CMOS အတွက် ထားပေးထားတဲ့ Battery ပါ။
Image credit: EtechnoG
CMOS ဆိုတာက ” Complementary Metal Oxide Semiconductor.” လို့ခေါ်ပြီး ကိုယ့် Motherboard ရဲ့ Setting တွေ၊ Time and Date တွေကို သိမ်းပေးထားတဲ့ အရာ ပါ။ ဒီကောင်က HDD တွေ၊ SSD တွေလို Power မလိုတဲ့ (Non-Volatile) Memory မဟုတ်ပဲ RAM လိုမျိုး Power ပိတ်လိုက်လို့ Power မရတော့တာနဲ့ Memory တွေ ပျက်သွားတဲ့ Volatile Memory အမျိုးအစားပါ။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ဒီ Lithium Battery လေးနဲ့ Power ကျွေးထားရပါတယ်။
18. SPDIF Connectors
SPDIF ဆိုတာ Sony/Philips Digital Interface လို့ ခေါ်ပြီး သူ့အလုပ်က Digital Audio Signals တွေကို Analog ပြောင်းစရာမလိုပဲ Device to Device ပို့ပေးနိုင်တဲ့ ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။
(တချို့ Budget Motherboard တွေမှာ မပါတတ်ပါ။)
19. Front Panel Audio Connectors
ဒီကောင်လဲ နံပါတ် 6,7တို့လို Casing အရှေ့က Audio အပေါက်တွေအတွက် Casing မှာ ပါလာတဲ့ ကြိုးနဲ့ လာချိတ်ရတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။
20. Super IO Chip
SIO လို့လဲ ခေါ်ပြီး သူ့အလုပ်က Lower Bandwidth နှေးတဲ့ Peripherals Devices တွေကို SouthBridge နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။ တချို့ Motherboard တွေမှာ ဒီ Chip က SouthBridge (Chipset) ထဲမှာ ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
Super IO Chip နဲ့ ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ Devices တွေကို အောက်က ပုံထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Devices handled by SIO
21. Audio Codec
ဒီကောင်ရဲ့ အဓိက အလုပ်က digital audio signals တွေကို Analog Signals အဖြစ်၊ Analog Signals တွေဆိုရင် Digital အဖြစ် ပြောင်းပေးတဲ့အလုပ်ကို အဓိက လုပ်ပါတယ်။ Audio သမားတွေအနေနဲ့ Sound Card သုံးမယ်ဆိုရင်လဲ Sound Card ရဲ့ Quality ဟာ ဒီ Audio Codec (Coder/ decoder) ပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်ပါတယ်။
ဆိုတော့ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ Components တွေလဲ စုံသလောက်ရှိပြီမလို့ ဒီနေရာမှာပဲ ရပ်ပါမယ်။ နားမလည်တဲ့နေရာတွေရှိရင် ဟိုးအပေါ်ဆုံးက Components Diagram နဲ့လဲ တိုက်ကြည့်နိုင်သလို Comment မှာလဲ မေးမြန်းခဲ့လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Episode6အနေနဲ့ GPU (Graphic Cards) တွေ အကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref: Fossbytes, Tom’s Hardware
Post Views: 1,357 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 ကျနော်တို့ Page ကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရပ်နားသွားတဲ့ Computer Parts တွေအကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးမှာကတော့ PC Parts